Olee otu esi enweta ezigbo nkuzi online?
Kedu otu esi esi ghọọ onye nkuzi ma na-emezi ọzụzụ na ụtụ isi?
Iji nweta ọganihu n'ọhịa ọ bụla, agụmakwụkwọ dị mkpa. Ndị mmadụ dị njikere itinye ego na nke a, na ndị nkụzi na-arụ ọrụ maka onwe ha, jiri ya mee ihe. Ọrụ nke onye nkụzi adịghị achọ nhazi ego, ma e wezụga maka ihe ọmụma ya. Ọ na-anọgide na-achọpụta otu esi esi ghọọ onye nkuzi.
Ntuzi - gini ka ọ bụ?
Onye nduzi okwu sitere na Latin "repetitor" - na nsụgharị "onye na-ekwughachi." Ndị ọrụ a na-enye ọzụzụ onwe ha n'ọzụzụ ọ bụla:
ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ mahadum;
asụsụ mba ọzọ, wdg.
E nwere ike ịmepụta klas na otu ma ọ bụ n'otu n'otu, n'ime ma ọ bụ na mpaghara (online). Ntuzi bụ azụmahịa dị oke ọnụ, ọ bụghị ọnụ ahịa, taa mkpa maka ya dị mma. Ọtụtụ mgbe (ma ọ bụghị mgbe niile) na-achọ onye nkuzi nke na-enye ndị na-enyocha ihe ndị ọzọ n'oge ule nyocha, nye ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ ndị na-enweghị ike ịmụta usoro ihe omume a. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mkpa maka enyemaka ndị nkụzi iji kwadebe maka USE abawanyela.
Ọ bara uru itinye aka na nkuzi?
Inye ihe omuma bu oru siri ike na oru. Ma ajụjụ bụ isi nke nwere ike ịkụziri ndị nkuzi: ọ ga-ekwe omume ị nweta ọrụ n 'nkuzi? Ọnụ ọgụgụ dị na ahịa a na - ekwu ihe ndị a:
Ihe kariri ọkara nke ndị nkụzi onwe ha na-arụ ọrụ a dị ka ọrụ dị mkpa ma na-arụpụta ya ọtụtụ ugboro karịa ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ.
Ihe kachasị mkpa bụ na Bekee na Russian, mgbakọ na mwepụ maka ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ.
Maka afọ 2015-2016. Ọnụ ego nke ịzụ ihe na onye nkụzi na Moscow na St. Petersburg - 900-1200 rubles. Na mpaghara - ruo 550 rubles.
Na nkenke, ọ bụrụ na ị na-enye ọbụlagodi 10 ihe omuma kwa ọnwa ma were maka rubles 500, ị nwere ike mejupụta ego site na 20,000 rubles. Ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ a, nweta ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ. Ihe kachasị mkpa: ịghọta ihe nuances nile ma mara otú e si eme ego na ịkụzi ihe, inwe atụmatụ azụmahịa doro anya. Ọrụ ọ bụla chọrọ ahụmahụ na ụgwọ - ego ma ọ bụ uche.
Kedu otu esi amalite nkuzi?
N'ahịa ahịa, nkuzi onwe onye abụghị ihe ọhụrụ. Ndị na-achọpụta otu esi amalite nkuzi nwere ike inweta ọtụtụ ndụmọdụ na ndụmọdụ site na ndị ọrụ "ahụmahụ". Na nke mbụ ọ dị mkpa:
chọta ndị na-ege ntị;
họrọ ebe dị warara ma gbalịa ịghọ ọkachamara ruru eru na ya;
Kpebie ọnọdụ nke ihe omumu - site n'aka onye nkuzi ma ọ bụ onye nkụzi n'ụlọ, na ụlọ ịgbazinye, online;
lezie anya na ọrụ ahụ kwadoro - ya bụ, denye aha na ọpụrụiche pụrụ iche ma ọ bụ ghọọ onye ọchụnta ego;
họrọ ihe nkuzi;
tinye mgbasa ozi gị.
Kedu ka esi etinye maka nyocha maka ụtụ isi?
Iji nweta ọrụ n'ocheeze, nwa amaala ọ bụla nwere onwe ya kwesịrị ịdebanye aha IP, ebe ọ gosiri ụdị ọrụ, ma họrọ usoro ụtụ isi: nke dị mfe na 6% (USN) ma ọ bụ patent. Nke abụọ ga - eri ihe - 18 000 rubles. Maka ọṅụ ndị nkụzi onwe ha, n'afọ 2017-18, a na-ewepụchaa ụtụ isi kwa afọ maka ụdị ọrụ ha. A nabatara patent maka nkuzi maka ọnwa ole na ole tupu afọ nke afọ a ma mepee ọtụtụ ohere maka onye nkụzi:
gosipụta ogologo ọrụ;
kpọsaa ọrụ ha;
iji nyefee ego gaa na ntinye ego nke obodo ma bụrụ onye na-akwụ ụtụ isi.
Ebee ka m nwere ike ịhụ ụmụ akwụkwọ maka nkuzi?
Isi nchegbu nke onye nkuzi bụ iji nweta ọrụ maka ọrụ ya ma chọpụta ụmụ akwụkwọ maka nkuzi. Iji malite, "onye na-azụ ahịa" ga-enwe ezigbo mmalite, nke ga-egosipụta àgwà ya niile, ahụmahụ ọrụ, na inweta agụmakwụkwọ. Ị nwere ike ịmepụta mgbasa ozi dabere na ọtụtụ ọrụ Ịntanetị. Ha nweere onwe ha, ebe onye nkụzi na-achọ ndị ahịa n'ebughị ụzọ tinye ego, ma kwụọ ụgwọ, ebe ọ na-adọta obere pasent nke ndị nhazi.
Nwa akwukwo choro nkuzi nwere ike ime na otutu uzo. Mbụ ị nwere ike ịlele ihe ndị a:
Rrofi.ru - otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu, ma, ọ dị mwute ikwu, nkwụnye ụgwọ nke nkuzi.
Repetitor4you.ru - saịtị n'efu maka ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ.
"Onye nduzi gị" bụ ihe ngosi nke na-ewe ọrụ maka ọrụ ya.
"Avito" na "Site na aka rue aka" - akwukwo akwukwo mgbasaozi zuru uwa, enwere ike ibu ihe.
Kedu ka esi ghọọ onye nduzi online?
Otu n'ime alaka nke nkuzi onye ọ bụla bụ ịkụziri ndị mmadụ ihe. N'ezie, nke a bụ ọrụ dịpụrụ adịpụ, nke a na-enye ihe ọmụma site na Ịntanetị : na Skype, site na oku vidiyo, site na e-mail. A na-arụ ọrụ na ntanetị ma ọ bụ na ntanetị, ị nwere ike iji kọmputa na mbadamba. Ọnọdụ bụ isi - ọnụnọ nke ihe gadget maka klas na video na ọdịdị elu na ya. Ọtụtụ ndị ahịa nke onwe ha na-aga n'ihu n'ịntanetị n'ihe omume ha. Nke a bara uru maka abụọ ahụ, maka ọtụtụ ihe kpatara ya:
ọ dịghị mkpa iji oge na ego na-aga n'okporo ụzọ;
I nwere ike itinye aka na nkuzi ihe ọ bụla (na ezumike, n'obodo);
mmepe nke teknụzụ ọmụma na-adọta ndị na-eto eto;
ọrụ dịpụrụ adịpụ dị ọnụ ala karịa ọpụpụ (oge zuru oke).
Kedu otu esi eme ezigbo nkuzi?
Ozughị ezu ịnye ọrụ nzi maka ịga nke ọma n'okwu a. Dị ka ọrụ ọ bụla, ọ chọrọ ọrụ, nkwụsi ike, nkà. Iji nweta ezigbo aha, ị nwere ike iji ndụmọdụ ndị a:
Gwa onye obula onye obula.
Iji mee ezi mmasị na nwa akwụkwọ.
Gaa na ndị mụrụ gị ma ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ na-eduzi ọmụmụ ihe. Gee ntị na nkatọ na ọchịchọ.
Bụrụ onye nkụzi na-agbanwe agbanwe oge.
Na-emeziwanye ọrụ ha.
Akwụkwọ banyere nkuzi
Ndị kpebiri ịghọ onye nkuzi nwere ike inye aka mbipụta pụrụ iche, akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ na ederede kọmputa. Edere otutu n'ime ha n'afọ ndị na-adịbeghị anya, mgbe nkuzi onwe onye bịara bụrụ ebe niile. Iji mara ihe ndị bụ isi nke ọrụ ahụ, usoro maka ndị nkụzi, akwụkwọ edemede, nkuzi na akwụkwọ gbasara ụzọ isi ghọọ onye nkuzi kwesịrị ekwesị. Ndị nke ikpeazụ gụnyere:
"Ọrụ m bụ onye nkuzi" , 2009. Akwụkwọ ọgụgụ ụwa maka ndị nkuzi malitere.
"Nna-ukwu nke onye nkuzi" , 2010. Usoro na usoro sitere n'aka Doug Lemonov.
"Art of Explaining," 2013 bụ ihe nzuzo nke ihe ịga nke ọma site na American Lee LeFever.
"Ọkà mmụta" , 2012. Onye nkụzi ọkachamara bụ Julie Dirksen nwere afọ 15 nwere ahụmahụ na-agwa ndị na-eso ụzọ ya otú ha ga esi esi kụziere ndị mmadụ ihe.
"Ụzọ nke ịkụziri asụsụ ndị mba ọzọ" , 2008. Nhọrọ nke akwụkwọ abụọ - usoro nkwekọ na omume, akwụkwọ ntuziaka nke E.V. Solovaya maka ndị nkụzi.
Dezie ederede - ebee ga-amalite?
Ụbọchị a na-edeghị aha
Oligopoly - a dị iche site na otu na ihe kpatara ya
Kedu otu esi emeghe ụlọ ntanetị?
Inye ego n'inwe oru oru ohuru na mmalite
Mahadum kachasị elu n'ụwa
Ntughari nke oru oru
Gigi Hadid kwetara na Zane Malik nyere ya
Ihe ịrịba ama na October 15
Ọhụụ Afọ Ọhụrụ
Theodicy - bụ nsogbu nke ihe dị egwu na oge a?
Nnukwu laryngitis na ụmụaka
Dreadlocks na obere ntutu
Ọrịa na-apụta na mmalite ime
Salad kabeeji kabeeji na tomato
Eji akwa na mmiri ara ehi
Max Mar - oge oyi-oyi 2016-2017
Kalina uhie - uru bara uru na contraindications
Egwuregwu edo edo n'ala
Chicken ofbacco in a frying pan - uzommeputa
Akpụ ụkwụ ụkwụ ụkwụ
Osisi mmiri na-ekpuchi akwụ - ihe ịrịba ama
Ihe omimi nke apple
Leptotriks na smear
24 cocktails na-atọ ụtọ ma dị mfe